निर्वाचन पराजयको समीक्षामा माओवादी , एमालेविरुद्ध कठोर वैचारिक संघर्ष प्रस्ताव – Rajdhani Daily
निर्वाचन पराजयको समीक्षामा माओवादी , एमालेविरुद्ध कठोर वैचारिक संघर्ष प्रस्ताव
नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा प्रदेश १ इन्चार्ज गोपाल किराती निर्वाचन अवधिभर आफ्नै कार्यक्षेत्रमा खटिए । सशस्त्र विद्रोहमा जति नै मेहनत स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको बताउने किरातीको प्रदेशमा पार्टीका लागि सन्तोषजनक नतिजा आएन ।
निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा नआएपछि आगामी २ साउनमा बस्ने पार्टी सचिवालय बैठकमा उनले पार्टी सर्वहाराकरण गर्नुपर्ने र एमालेविरुद्ध कठोर वैचारिक संघर्षमा उत्रनुपर्ने माग बोकेर प्रस्तुत हुँदै छन् । ‘जनयुद्धकै जति चुनावमा खटियो तर सोचेजस्तो नतिजा आएन’ उनले राजधानीसँग भने, ‘अब पार्टी यहीँ तरिकाले चलेर नहुने भयो, संशोधनवाद तथा एमालेविरुद्ध वैचारिक संघर्षमा उत्रनुपर्दछ, पार्टी सर्वहाराकरण गर्नुपर्दछ ।’
अर्का हेडक्वार्टर सदस्य मणि थापा निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुमा प्रमुख कारण आन्तरिक नै रहेको ठान्छन् । ‘माओवादीले आफ्नो विचार र एजेन्डालाई जनतासम्म पु¥याउनैसकेन,’ उनले भने ‘उज्यालो नेपाल माओवादी नेतृत्व सरकारले ग¥यो । आर्थिक वृद्धिसहित विकासमा थुप्रै काम भए । यस्ता धेरै काम भए पनि जनतासम्म पु¥याउन सकेनौं ।’ पार्टी एकतालाई तल्लो तहसम्म पु¥याउन नसक्नुले पनि असर गरेको उनको भनाइ छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल भए पनि नतिजा भने सन्तोषजनक नभएको नेताहरूको विश्लेषण छ । चुनावअघि २ सयभन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले दुई चरणको निर्वाचनमा गरेर सय सिटसमेत जित्न सकेन । माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणमा ४६ र दोस्रो चरणमा ३८ सिट जितेको छ । पहिलो हुने एमालेले २ सय ७६ र दोस्रो दल बनेको कांग्रेसले २ सय २६ स्थानीय तहमा नेतृत्व जित्दा माओवादी भने सयभन्दा तल पुगेको छ ।
प्रदेश दुईका इन्चार्जसमेत रहेका यादव जनतामा नगएकै कारण पार्टीले हार बेहोरेको बताउँछन् । ‘पार्टी जनतामा नै गएन । संगठन निर्माणमा ध्यान नै गएन । उनले भने, ‘खेती नलगाउने अनि बाली मात्र काट्न खोजेर हुन्छ र ? मलाई त अपेक्षाभन्दा राम्रो आयो जस्तो पो लाग्छ ।’
पार्टी सर्वहाराकरण नगर्ने र एमालेका विरुद्ध कठोर वैचारिक संघर्ष नगर्ने हो भने यस्तै भइरहन्छ – गोपाल किराती
पार्टी जनतामै गएन । संगठन बनाउने काम नै भएन । खेती नलगाउने तर बाली काट्न मात्र खोजियो – मातृका यादव
कतिपय स्थानमा बुथ कमिटीसमेत भेटिएनन् ।बुथ कमिटी नै नभएको ठाउँबाट के रिजल्ट आउला ? – लेखनाथ न्यौपाने
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीताको उपचारका लागि थाइल्यान्डमा रहेका छन् । उनी शुक्रबार काठमाडौं आउनेछन् । थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नुअगाडि मंगलबार हेडक्वार्टर बैठक बोलाएर उनले २ साउनको बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् ।